Xiaomi Mi 9 na-anata ụdị beta kachasị ọhụrụ nke 10.9.4.17 nke MIUI nke na-echebe ya site na ndị hackers | Gam akporosis
El Xiaomi Mi 9 enwetala a ohuru beta melite na-abia dika MIUI 10.9.4.17 ma tinye ụfọdụ atụmatụ na ngwaọrụ ahụ.
Nke kacha pụta ìhè bụ Nchedo Wi-Fi nyocha, nke ihu ọma na-echebe gị ama si adreesị Mac si hackers ịgụ isiokwu na ọha na eze Wi-Fi njikọ.
O doro anya na, Igbe nyocha Wi-Fi bụ nnukwu ihe na China, ebe a na-ekwu na ndị na-agba ọsọ na-enweta ihe ọmụma site na ndị ọrụ smartphone, dị ka adreesị Mac, site na ha. Igbe ndị a na-achọ smartphones ndị na-enyocha netwọk Wi-Fi ọha na eze na, na usoro, na-ezu ohi adreesị Mac ha, si otú a na-emebi nchebe ha na ịnweta data onye ọrụ nzuzo.
Xiaomi Mi 9 na-anata MIUI 10.9.4.17 beta
Xiaomi abụghị nke mbụ ama iji dozie nsogbu a. Huawei kpughere n'ọnwa gara aga na ngwaọrụ ya niile na-agba ọsọ na EMUI 8 ma ọ bụ ụdị ọhụụ nke oyi akwa echedolarị.
Mmelite ọhụrụ ahụ na-echebe ekwentị site na iji adreesị Mac na-enweghị usoro mgbe ị na-ejikọ na netwọk Wi-Fi. A gam akporoMaka akụkụ ya, o nweelarịrị ihe ngosi a na-esonye, ​​mana ọ nwere nkwarụ na ndabara. Ewezuga nke a, Nwelite beta ọhụrụ nke Xiaomi na-agbakwunyekwa nhọrọ iji mee ka ị mara ọkwa.
Dabere na XDA-Mmepe, atụmatụ nchebe Wi-Fi ga-adị na beta na-ewuli elu na-agba ọsọ na gam akporo 8.1 Oreo, yana gam akporo 9 Pie.
N'aka nke ọzọ, atụmatụ nke Bienestar Dijitalụ na MIUI 9.4.15 beta version 10. Akụkụ a pụrụ iche na njirimara onye ọrụ ga-egosi gị oge ị na-etinye na ngwa ọ bụla, oge ole ị kpọghere ekwentị na ọnụ ọgụgụ nke ọkwa sitere na ngwa ọ bụla, kwa ụbọchị, kwa izu na kwa ọnwa, yana nkọwa ndị ọzọ.
(Ayszọ: 1 y 2)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi 9 na-anata ụdị beta kachasị ọhụrụ nke 10.9.4.17 nke MIUI nke na-echebe ya pụọ ​​na ndị na-agba ọsọ
Google Maps na-egosi na mpụta adreesị site na desktọọpụ ahụ na akpaghị aka